Making love with brother yemurume wangu Bamunini Fainos – VanodaZvinhu
by DrSviro · January 25, 2016
Babamudiki kubva musi watasvirana vakatanga kuita kunyara kushoma.
He was very romantic asikana, ndoda hangu kutenda. Ndofunga mhuri yavo vaivewo vaka pihwa chipo chekuva very attentive and caring to the women in their lives. I have to believe chipo nokuti kune mimwe misha vakadzi vemo vano jandaidzwa zvikuru.
Fainos akabva asvikowira mumaoko angu ndichibva ndamumbundira. Iyewo zvakabva zvamupa chivindi and he held me closer and tighter too. Miromo yedu yakawanana yega ndokubva tatsvodana hedu. It was a deep passionate kiss, ndimi dzedu dzakarwa hondo yerudo tichinakirwa. Maoko ake Fainos akanga ari mushishi yekusvinyanga magaro angu. Oh he was so gentle and firm.Ndakanzwa ndakunzwa kuda kusvirwa ndikaziva kuti chikara chamuka. Ndakamira kumutsvoda ndokubvisa hembe yake. Fainos ane chipfuva chine vhudzi shoma, just the way I like it kwete kuita chipfuva chinenge chepwere chisina kana chii zvacho. Ko ndizvo zvandinodawo nhai asikana. I know vamwe munoda zvakadaro, hakusi kushora, ndiri kungorevawo zvandinoda!
As I took off his shirt ndakabva ndati kamunyatso kamwe chete mukanwa nde ndokukakweva ndichikarumirira. “Ah Lord, yes!” Fainos akadaro nekunakirwa.
Ini I took that as encouragement ndokutunwa twose, ndikati aka ndobva ndati kamwe kacho. My new murume aka tamba tamba panzvimbo imwe achibva abata kugotsi kwangu ndokundi tsitsirira panyatso yake. Ini handina kumbomira, I flicked my tongue on the little kamunyatso wanikwe muchinda oshinyira.I pulled free ndokusunungura belt rake nekubvisa his trousers.
Ndakabata zvese bhurugwa neunderwear ndokudhonzera pasi. Initially mboro yakadzika nebhurugwa and when it was released yakaita kunge ine spring. Ini semunhu who was quite close yakandirova pachirebvu ndichibva ndaibata. Ndakaibata kudaro ndakamubisa bhurugwa rese nerumwe ruoko. Ndakatarisa mboro ndokusimudza musoro. Fainos aive akanditarisa aka shama muromo zviya zvekunakirwa nekushamisika at the same time. Ndakamutswinyira ziso ndokudzokera kumboro yake.
Yaive yobuda misodzi, ndokubva ndatora muto waive wobuda ndokuuzora panzvonyo yose, making sure kuti kugotsi kwenzvonyo, the helmet, was fully coated. Handizivi zvazvinoita but I remembered kuti Jose airasa njere ndikadaro! Fainos was no exception, mwana wevanhu akanakirwa. Akange ongoita masounds ari meaningless.
Handina kumupa nguva yekuziva kuti what’s next ndichibva ndaisa mboro mukanwa mangu and sucked deeply.“Ahhh, maiguru kani, ahhh, ndofa nekunakirwa.”
Fainos said. Ndakanwa mboro mwana wevanhu ndokunzwa oda kudonha, makumbo arera nezemwa. Ndakapinza ruoko rwangu pakati pemakumbo ndokuguguchira machende ake, zvinyoro nyoro. Ndakamara zvishoma nemunwe munongedzashe pakati pemachende neburi retsvina Fainos achibva akwakuka nekunakirwa nekuvhunduka. Mboro yake yakapotsa yapinda pahuro pangu chaipo. I pulled him closer ndichidhonza magaro ake ndokumusveta again and this time munwe ndokunanga paburi chaipo. Fainos clamped his bum shut but munwe was relentless. I increased suction kumboro munhu ndokunakirwa ndokusungura shure. Paakangodaro chete ndakabva ndapuruzira buri munhu achibva arasa njere.
Next story Kurohwa ne Nyoro na Joe taenda kulake